Kooxda Mustaqbalka Aqoonta iyo AfricArXiv waxay bilaabeen Keydinta Diyaarinta Maqalka / Muuqaalka ee PubPub - AfricArXiv
Published by Kooxda Mustaqbalka Aqoonta & AfricArXiv on 23rd April 2020 23rd April 2020
PubPub, oo ah madal iskaashi furan oo ay dhistay Kooxda Aqoonta Mustaqbalka, ayaa iskaashi lala yeelatay AfrikArXiv, bakhaarada daabacaadda Afrikada, si ay u martigeliso maqal / muuqaal diyaarin ah. Wadashaqeyntaani waxay awood u siineysaa gudbinta warbaahin badan oo ku saabsan wax soo saarka cilmi baarista, oo ay kujirto kaqeybgalka bulshada iyo jawaab celinta cilmibaareyaasha.
Faahfaahin dheeraad ah fadlan booqo africarxiv.pubpub.org
Soo jeedinta DOI: 10.21428/3b2160cd.dd0b543c
Maaddaama ay tahay madal martigelin loogu talagalay daabacaadda, qoraallada la aqbalay, iyo daabacaadda kadib, oo ay ku jiraan awoodda isku xirnaanta xogta iyo koodhka, AfricArXiv waxay markaa sii kordhineysaa saameynta iyo adduunka oo dhan ee ku-biirista cilmi-baarayaasha Afrikaanka ah ee saldhigga aqoonta adduunka.
Daahfurka hore ee maqalka / muuqaalka wuxuu u qaadanayaa isgaarsiinta cilmiga heerka xigga - iyadoo la siinayo saynisyahannada barmaamijyo badan oo warbaahin ah si ay ugu muujiyaan qibradooda qoraalka oo keliya laakiin ay si dhab ah ula shaqeeyaan cilmibaareyaasha kale. Hindisahan ayaa sidoo kale ka caawinaya cilmi baarayaal Afrikaan ah inay shaqadooda ku xiraan wixii ka baxsan qoraalka iyaga oo wata shucuur aan la taaban karin oo mashruuc deg deg ah iyo ku habboonaanta saameynta ku leh Afrika iyo adduunka oo dhan. ”
Joy Owango, Agaasimaha TCC Africa
Waxaan ku faraxsanahay inaan tijaabin karno tan iyo annaga oo iskaashi la sameynna Kooxda Aqoonta Mustaqbalka iyo websaydhkooda wada shaqeynta badan ee PubPub. Iskaashigan ayaa awood u siineysa cilmi baarayaasha Afrikaanka in ay sahamiyaan isgaarsiinta deg deg ah ee baaritaankooda inkastoo xirida COVID-19. Natiijooyinka ka soo baxa dadaalkan ayaa naga caawin doona inaan sii fahanto istaraatiijiyada ugu wanaagsan ee COVID-19 iyo istiraatiijiyadda wax ka qabashada cilmi-baareyaasha Afrika oo dhan.
Obasegun Ayodele, CTO ee Vilsquare
PubPub iyo AfricArXiv waxay wadaagaan jaceylka Sayniska Furan, oo awood u siinaya wadaagga cilmi-baarista maadooyinka kala duwan, iyo hal-abuurnimada ay hoggaaminayso bulshada. "AfricArXiv waxay bixisaa marin aad u qiimo badan iyo iskaashi u gooni ah cilmi-baarayaasha Afrikaanka ah ee doonaya inay si dhaqso leh oo wax ku ool ah ula xiriiraan shaqadooda," ayay tiri Heather Ruland Staines, Madaxa Iskaashiga Kooxda Mustaqbalka Aqoonta. “PubPub waxay ku faraxsan tahay inay martigeliso qaabab cusub oo horay loo daabulayo si ay gacan uga geysato hubinta in shaqada aqoonyahannada Afrika ay ku jiraan iskaashiga qiimaha leh ee dhacaya si loo helo daawo loona yareeyo saameynta COVID-19, iyadoo aan loo eegin luqadda lagu bixiyo. Waxaan rajeyneynaa inaan wada baari doonno qaababkan cusub ee isgaarsiinta cilmiga leh. ”
Ku Saabsan Kooxda Mustaqbalka Aqoonta
Kooxda Mustaqbalka Aqoonta, oo lagu aasaasay MIT, waa beelloolajiyadda teknolojiyadda, kuwa sameeya macluumaadka, iyo soo saareyaasha aqoonyahannada ah ee ka go'an in ay wax ka qabtaan aasaasyada mowduucyada cadaadiska iyo isku-dhafan ee ka dhex jira xarumaha cilmi-baarista. Hadafka KFG waa in la horumariyo aalado furan, kaabayaal, iyo moodallo ganacsi oo hufan oo ku soo koobi doona abuuritaanka aqoonta iyo adeegsiga xagga sinnaanta iyo madax-bannaanida.
Sidee loo tixraacaa tan: Ayodele, O., Havemann, J., Owango, J., Ksibi, N., & Ahearn, C. (2020). Soo jeedin AfrikaArXiv. https://doi.org/10.21428/3b2160cd.dd0b543c
Categories:	iskaashiCovid-19Furan FuranDiyaargarowPublishingIsgaarsiinta Sayniska
Tags: Kooxda Mustaqbalka AqoontaPubPub